I-Crofton Cottage Port yase-Echuca - I-Airbnb
I-Crofton Cottage Port yase-Echuca
Echuca, Victoria, i-Australia
I-i-guesthouse ephelele ibungazwe ngu-Jill
Indawo yokuhlala ye-Boutique ukuze uphumule futhi uphumule e-Crofton Cottage lapho uzojabulela khona isitayela esihle senkathi equkethwe ngokugcwele indlu encane eqedwe kahle ngemininingwane emihle kakhulu.
Indawo ekahle yamaholide amahle kakhulu endaweni yamagugu e-Echuca, ebhekene ne-Victoria Park reserve kanye ne-scenic drive, lapho i-Campaspe ihlangana ne-Murray.
I-Victorian Heritage Design - endaweni yomlando yechweba.
Umfula i-Murray uhamba imizuzu nje ukusuka esangweni elingaphambili, izivakashi zingakwazi ukugibela i-Paddle Steamer ziwele endaweni yokukhiqiza iwayini noma uhambo lwemizuzu emihlanu ukuze uthole ichweba lase-Echuca lapho ungazitika khona ngezindawo zokudlela ezihamba phambili ze-Echuca, izitolo ezikhethekile futhi uhlole umlingo Wechweba Lomlando, ikhaya leqoqo elikhulu kunawo wonke lama-paddle steamers emhlabeni.
I-Old World Charm and Heritage
Inophahla lwangaphakathi lwe-10ft, iwindi elihle elihlelwe yi-bay, indawo yomlilo evulekile kanye nesitayela sangaphakathi senkathi eyinkimbinkimbi, i-Crofton Cottage iyona ehamba phambili ezindaweni zokuhlala zikanokusho ezimbili.
Ikotishi linendawo yombhede ka-Queen, igumbi lokugezela, igumbi lokugqoka, ikhishi elivulekile (kuhlanganisa ipuleti elishisayo, i-microwave, ifriji, i-toaster, igedlela), izihlalo zokuphumula, indawo yomlilo, i-flat screen TV, i-DVD player, i-stereo, ukufudumeza, i-air conditioning. kanye nakho konke ukucupha okwengeziwe okwenza ukuhlala kwakho kube umlingo.
Qaphela: Nakuba ezinye izilwane ezifuywayo ezincane zingavunyelwa ngokwesicelo - sicela zibe ngaphansi kolawulo lwakho ngaso sonke isikhathi ngesikhathi sokuhlala kwakho.
4.95 out of 5 stars from 125 reviews
4.95 · 125 okushiwo abanye
Bonisa zonke izibuyekezo ezingu-125
Loving my art of Painting and the garden.
Siyatholakala kodwa ubumfihlo bezivakashi bubalulekile.
Hlola ezinye izinketho ezise- Echuca namaphethelo